Amazon inopemberera Bhuku reBhuku nekutipa iyo 20 euro dhisikaundi paMhando Yekufamba uye iyo Kindle Paperwhite | MaReaders ese
Amazon inopemberera Bhuku reBhuku nekutipa iyo 20 euro dhisikaundi paMhando Yekufamba uye iyo Kindle Paperwhite
Vhiki rino iSvondo reBhuku uye zvingave sei zvisina kudaro Amazon yanga isingade kupotsa musangano, uye iri chikonzero chekuti nderimwe remaraibhurari edhijitari akakura kwazvo pasirese. Uye zvakare, maReaders ayo, iwo Mhando, ari pakati pevanotengesa zvakanyanya pasirese uye zvakare ari mamwe emafungiro akanakisa anogamuchirwa nevashandisi.
Chaizvoizvo kambani inomhanya naJeff Bezos yanga ichida kupemberera iri rinokosha vhiki kwatiri tese tinofarira mabhuku, ichitipa mutero unonaka pane maviri emabhuku avo emagetsi. Kunyanya ivo vakadzikiswa ne20 euros iyo Kindle Paperwhite, Mutengo wake wave ikozvino 109.99 euros uye iyo Kindle Voyage iyo zvino yatengwa pamari gumi nematanhatu.
Pasina kupokana izvi iwo mukana unonakidza kwazvo wekuwana iwo Kindle uye ubatsirwe neiyi dhisikaundi, iyo semuenzaniso yatinogona kushandisa kutenga mashoma mashoma emabhuku kana kunyorera ku Kindle Unlimited, yeAmazon yekuverenga sevhisi iyo inotibvumidza isu kuverenga mabhuku asina muganho e9.95 euros.
Pano tinokuratidza maReaders ese ayo Amazon arikutengesa, ine chinongedzo chayo chinoenderana kuitira kuti ugone kuzviwana, nechisviniro chakabatanidzwa, uye wovagamuchira mumaawa mashoma kumba kwako.
Kindle Voyage WiFi E-muverengi: 169,99 euros
Kindle Voyage 3G + WiFi E-kuverenga: 229,99 euros
Kindle Paperwhite WiFi E-kuverenga: 109,99 euros (ine yakakosha dhisikaundi)
Kindle Paperwhite WiFi E-kuverenga: 119,99 euros
Kindle Paperwhite 3G + WiFi E-kuverenga: 169,99 euros (ine yakakosha dhisikaundi)
Kindle Paperwhite 3G + Wifi E-muverengi: 179,99 euros
Wakagadzirira kushandisa mukana iwoyo Amazon inotipa isu kuti titenge Kindle ine inotapira dhisikaundi?.
Yakazara nzira kuchinyorwa: MaReaders ese » makambani » Amazon Kindle » Amazon inopemberera Bhuku reBhuku nekutipa iyo 20 euro dhisikaundi paMhando Yekufamba uye iyo Kindle Paperwhite
mutariri 58 akadaro
Kutanga, ndatenda nekuenderera bhurogu. Kwechinguva ndakatya kuti kukanganisa kwacho kwaisazivikanwa.
Chechipiri… Ini ndinoda iyo kindle Hardware (yakafanana neApple's), asi ini ndinonetsekana nezve yayo yakati monopolistic mutemo. (zvakafanana neApple).
Ini ndinoshamisika kuti nei iyo Oasis yasara kunze kwezvose izvi zvinopihwa ...
Iyo nyowani vhezheni yeKobo Aura H2O yave pamutemo
Kobo ane maReaders akawanda asi haisiriyo kambani inotengesa ebook akawanda